Sony inoronga kuvhura mitambo yayo yePlayStation pa iPhone ne iPad | IPhone nhau
Toni Cortés | 11/04/2021 20:46 | IPhone mitambo
Sezvo Sony yakasiya yayo PS Vita, unoziva urikushaya mabhiri mazhinji. Mitambo pane nharembozha ndeyehasha dzese, kungave pane diki skrini ye iPhone, kana pachiratidziro chakakura chePads.
Saka arikuronga kutora mukana wekudhirowa kwake kukuru PlayStation akasarudzika mazita, uye kuvhura avo anoenderana vhezheni akagadziridzwa iOS uye iPadOS. Nhau huru, pasina kupokana.
Sony inoronga kuwedzera kuedza kwayo mukugadzira mitambo yemafoni nhare. Iri kutsvaga mapurogiramu ekugadzirisa akawanda maStartStation franchise kuti atambe pa iPhone nePadad mune ramangwana.
Iyo zano rakawanikwa neyekushambadzira kwebasa
Wakawanikwa kushambadzira kwebasa kutsvaga mumwe munhu webasa re "Musoro weMobile, PlayStation Studios, Sony Interactive Varaidzo", muCalifornia. Chiziviso chinotsanangura kuti mumiriri "anotungamira ese matunhu ekuwedzera kwavo kusimudzira kwemitambo, kubva kunyaradzo nemaPC kuenda kune nhare uye kurarama masevhisi," asi nekutarisa "zvinobudirira kugadzirisa zvinonyanya kufarirwa PlayStation franchise yemafoni.".
Mukwikwidzi akabudirira anozove nebasa re "kuvaka uye kuyera timu yevanogadzira nhare" uye achashanda se "mukuru weiyi nyowani bhizinesi unit mukati mePlayStation Studios." Ehezve, kana ivo vaida kuzvichengeta chakavanzika, mukuru wekuhaya vashandi kubva Sony kurwa kwakanaka kunenge kwawira kwaari.
Iyo yekunyora tsamba ye Dreamcast Nharembozha yatovepo uye inoshanda, uye yakaunza mamwe mazita enhare, kusanganisira "Mhanya Sackboy!" uye "Unchched: Fortune Hunter" pakati pevamwe. Akashandawo semupepeti wemimwe mitambo yePc yakavakirwa pamitambo yePlayStation, inosanganisira "Horizon: Zero Dawn" uye "Wese Munhu Akaenda Kubvutwa."
Sony yaimbove neinokosha kuvapo mumitambo mbozhanhare, senge iyo Xperia Play smartphone uye nhandare yayo yemutambo. PSP y PS Vita. Iko kune zvakare kugona kutamba mitambo ye PlayStation kuburikidza neiyo iPhone kana iPad, uchishandisa Remote Play app kutenderera kubva kune koni pamusoro petiweki.
Nintendo iri kutotarisa nzira nyowani dzebhizinesi paIOS uye iPadOS.
Sony inoda kuongorora nzira iyo Nintendo atoedza nehupfumi. Muna 2017, Nintendo akatanga kuburitsa mitambo yeApple zvichibva pamafranchise makuru akadai se "Super Mario Run" uye "Fire Emblem Magamba", nekugamuchirwa kwakanaka kwevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Sony inoronga kuburitsa mitambo yayo yePlayStation pa iPhone ne iPad